Igumbi elihle elinebalcony kunye neenkcukacha zakho. - I-Airbnb
Igumbi elihle elinebalcony kunye neenkcukacha zakho.
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguChela
Nice kunye gumbi kunye balcony encinane, nto leyo evumela emantla izibane kakhulu, indlu ibekwe umzi kufutshane kakhulu ngeyona nemivalo, iindawo zokutyela, kwindawo zokuhlala, kunye zokhuseleko zabucala iiyure ezingama-24, phambi kwe-Business Centre Puerta Bajío, phambi kweStarbuks kunye neGym nanini na. Unokusebenzisa ezinye iindawo eziqhelekileyo zendlu. Ndingathanda ukukwamkela endlwini yam kwaye ndikuxhase ngezinto oziphethe edolophini.
Ligumbi elitofotofo kwaye lihle kakhulu endililungiselele ngononophelo olukhulu kunye nengqalelo yeendwendwe zam, indlu ibekwe phambi kwePuerta Bajío, iziko elitsha leshishini, ukuba uhamba ngeshishini kuya kuba luncedo kakhulu ukuhlala nam, kukho Starbuks kunye malunga Gym, ndiqinisekile ukuba uza konwaba kakhulu (a) endlwini yam.
4.99 · Izimvo eziyi-173
Le ndawo yokuhlala izolile kakhulu xa kunikwa ukufikelela okuthintelweyo kunye nokhuseleko lwabucala enalo, oonogada benza imijikelo ngamaxesha ezitalatweni zolwahlulo.
Umbuki zindwendwe ngu- Chela
Soy una mujer de 55 años y me gusta mucho recibir huéspedes, atenderlos y apoyarlos en lo que necesiten, lo hago con mucho gusto!!! Para mi es un placer recibirlos en casa y hacer que se sientan muy agusto!!
Ndiyawuthanda umbono wokunxulumana neendwendwe nanini na zifuna.
Ndiyavuya ukuphendula imibuzo yakho ngefowuni, umyalezo obhaliweyo okanye i-imeyile.